April 2019 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Qarax khasaare dhaliyay Oo ka dhacay Dhoobley.
Axmad	 Apr 30, 2019 0
Wararka ka imaanaya deegaanka Dhoobley ee dhaca xuduud beenaadka ayaa ku waramaya in qarax khasaare dhaliyay lala beegsaday ciidamo katirsan maamulka Jubbaland. Qaraxa wuxuu ka dhacay goob isku imaatin ah oo ay ciidamadu ku qayilaan,…
Maamulka Soomaali-land ee ka arrimiya dhulka wuqooyi galbeed Soomaaliya ayaa soo shirkad ajanabi ah ku wareejiyay shidaal keenista deegaannada uu ka arriimiyo maamulkaas. Shirkad lagu magacaabo TRAFIGURA oo fadhigeedu yahay magaalada…
Askari Lagu dilay magaalada Kismaayo.
Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose waxaa ka dhacay dil loo geystay askari katirsan ciidamada maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo Axmad Madoobe. Dilka Askariga waxa geystay askari kale oo katirsan ciidamada Jubbaland,…
guuleed	 Apr 29, 2019 0
inshaa allaah qeybta hoose waxaad kala degi kartaa warka duhurnimo oo lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan kala deg warka duhurnimo ee Alfurqaan 29 04 2019
Xubin katirsan Sirdoonka Imaaraadka oo is dilay.
Axmad	 Apr 29, 2019 0
Warbaahinta Turkiga ayaa baahiyay warar la xiriira inuu is dilay mid kamid ah laba ruux oo dhawaan ay qabteen ciidamada amaanka dowladda Turkiga. Labada qof ee la qabtay ayay laamaha Amaanka ee Turkiga ku eedayeen iney ahaayeen rag…
Askar Lagu dilay duleedka Muqdisho.
Qarax culus oo ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay askar katirsan ciidamada dowladda ee uu madaxda ka yahay Maxamad Farmaajo. Askar katirsan ciidamada dowladda ayaa lagu beegsaday deegaanka Weydow ee…